विलम्बपूर्वक गर्नुपर्ने कर्महरु (महाभारत–चिन्तन) – Chitwan Post
विलम्बपूर्वक गर्नुपर्ने कर्महरु (महाभारत–चिन्तन)
गुरूजनहरुको आज्ञाका कारण अवश्य गर्नुपर्ने कर्म छन् तर हिंसायुक्त भएकाले दुष्कर र अनुचित देखिन्छन् भने त्यस अवस्थामा त्यस्तो कर्म तत्काल गर्ने कि धेरै समयसम्म त्यसमाथि विचार गरिरहने ? भन्ने जिज्ञासा युधिष्ठिरले भीष्मसमक्ष राख्छन् । त्यसको प्रत्युत्तर दिने क्रममा भीष्मले धेरै समयसम्म सोचविचार गरेर कर्म गर्नुपर्छ भन्ने जुन प्राचीन व्याख्यामा आधारित उपदेश युधिष्ठिरलाई दिएका थिए त्यही उपदेशलाई यहाँ दूरदर्शी कर्म वा विलम्बपूर्वक गर्नुपर्ने कर्म ठानिएको छ ।
महर्षि गौतमको चिरकारी नामक एउटा महाज्ञानी पुत्र थियो । उसले गर्नुपर्ने सबै कर्महरु राम्रोसँग सोचविचार गरेर ढिलो गर्ने गथ्र्यो । गर्नुपर्ने सबै कर्महरु धेरै समयसम्म विचार गरेर गथ्र्यो, धेरै समयसम्म जाग्थ्यो, धेरै समयसम्म सुत्थ्यो र धेरै समयपछि नै कार्य पूर्ण गथ्र्यो । त्यसैले उसलाई सबैले चिरकारी भन्ने गर्दथे । जसले पछिसम्मको कुरा सोच्दैनथे त्यस्ता मन्दबुद्धि भएका व्यक्तिहरुले उसलाई दुर्बुद्धि र अल्छी भन्ने गर्थे ।
एकदिनको कुरा हो महर्षि गौतमले आफ्नी श्रीमतीद्वारा गरिएको कुनै व्यभिचारका कारण क्रुद्ध भएर आफ्ना अन्य पुत्रहरुलाई नभनी चिरकारीसँग तिमीले आफ्नी पापिनी आमालाई मार भने । कुनै विचार नगरीकन यसरी पुत्रलाई आज्ञा दिएर उनी वनमा गए । चिरकारीले पिताको आज्ञालाई ‘हुन्छ’ भनेर स्वीकृति जनायो र धेरै समयसम्म त्यही कुरा सोचिरह्यो । उसले पिताको आज्ञाको पनि पालना हुने र माता पनि नमर्ने कुन उपायले काम लिऊँ भन्ने कुरा विचार गरिरह्यो । धर्मको बहानाले मेरासामु ठूलो सङ्कट आयो । ‘पितुराज्ञा परो धर्मः स्वधर्मो मातृरक्षणम्’ (महाभारत १२।२६६।११) अर्थात् पिताको आज्ञा पालन गर्नु पुत्रको परम धर्म हो र माताको रक्षा गर्नु पनि पुत्रको प्रधान धर्म हो । त्यसैले पुत्र कहिल्यै स्वतन्त्र रहन सक्तैन, ऊ सदैव आमाबुबाकै अधीनमा रहन्छ । तसर्थ मैले के गरुँ ? जसबाट मलाई धर्मको हानिरुपी पीडा नहोस् ।
एक त स्त्रीजाति अर्कातिर आमाको वध गरेर कुन पुत्रले कहिले सुख प्राप्त गर्न सक्छ ? पिताको अवहेलना गरेर पनि कसले प्रतिष्ठा पाउन सक्छ ? पिताको अनादर गर्नु उचित छैन र माताको रक्षा गर्नु पनि पुत्रको धर्म हो । यी दुवै धर्म उचित र योग्य छन् । मैले कसरी यिनको उल्लङ्घन नगरुँ ? पिताले स्वयं आफ्नो शील, सदाचार, कुल र गोत्रको रक्षाका लागि स्त्रीका गर्भमा आफ्नै आधान गर्छन् र पुत्ररुपमा उत्पन्न गर्छन् । तसर्थ मलाई माता र पिता दुवैले पुत्ररुपमा जन्म दिएका हुन् । मैले यी दुवैलाई आफ्नो जन्मको कारण मान्दछु ।
जातकर्म संस्कार र उपनयन संस्कारका समयमा पिताले जुन आशीर्वाद दिएका छन् त्यो पिताको गौरवलाई निश्चय गराउन पर्याप्त र सुदृढ प्रमाण हो । ‘गुरूरग्ग्र्यः परो धर्मः पोषणाध्यापनान्वितः, पिता यदाह धर्मः स वेदेष्वपि सुनिश्चितः’ (पूर्ववत् १२।२६६।१७) अर्थात् पिता भरणपोषण गर्ने तथा शिक्षा दिने भएकाले पुत्रको प्रधान गुरू हुन् । उनी परम धर्मको साक्षात् स्वरुप हुन् । पिताले जेजस्तो आज्ञा दिन्छन् त्यसैलाई धर्म सम्झेर स्वीकार गर्नुपर्छ । वेदमा पनि त्यसैलाई धर्मका रुपमा निश्चित गरिएको छ । पुत्र पिताको सम्पूर्ण प्रीतिरुप हो र पिता पुत्रका सर्वस्व हुन् । तसर्थ पिताको आदेश पालना गर्नुपर्छ । त्यसमा कहिल्यै कुनै विचार गर्नु हुँदैन । जसले पिताको आज्ञा पालन गर्दछ उसका पापकर्महरु पनि नष्ट हुन्छन् । त्यसैले पिता धर्म हुन्, पिता स्वर्ग हुन् र पिता नै सबैभन्दा ठूलो तपस्या हुन्, पिता प्रसन्न भएमा सम्पूर्ण देवताहरु पनि प्रसन्न हुन्छन्–
तस्मात् पितुर्वचः कार्यं
न विचार्यं कदाचन ।
पितुः शासनकारिणः ।।
पिता धर्मः पिता स्वर्गः
पिता हि परमं तपः ।
सर्वाः प्रीयन्ति देवताः ।।
(पूर्ववत् १२।२६६।१९, २१)
जसरी अग्नि उत्पन्न हुनमा अरणी काठ मुख्य आधार मानिन्छ त्यसैगरी मेरो पाञ्चभौतिक शरीर उत्पन्न हुनमा पनि आमा नै मुख्य कारण हुन् । संसारका समस्त दुःखी प्राणीहरुलाई सुख र सान्त्वना प्रदान गर्ने व्यक्ति नै आमा हुन् । ‘मातृलाभे सनाथत्वमनाथत्वं विपर्यये’ (पूर्ववत् १२।२६६।२६) अर्थात् जबसम्म आमा जीवित रहन्छिन् तबसम्म मान्छेले सनाथ वा अभिभावकयुक्त सम्झन्छ र आमा जीवित नरहँदा मान्छेले आपूmलाई अनाथ वा अभिभावकविहीन ठान्दछ । आमा रहँदासम्म मान्छेलाई कहिल्यै चिन्ता हुँदैन र बुढ्याइँ पनि आउँदैन । जसले आफ्नी आमालाई बोलाउँदै घरमा आउँछ ऊ निर्धन भएर पनि मानौं उसलाई माता अन्नपूर्णाका सामु गएको अनुभूति हुन्छ ।
छोरा र नातिले सम्पन्न भएर पनि जो आमाका साथमा रहन्छ सय वर्षको भए पनि उसले दुई वर्षको जस्तो आचरण गर्दछ । छोरो समर्थ होस् या असमर्थ, दुब्लो होस् वा हृष्टपुष्ट आमाले उसलाई पाल्छिन् । आमाविना अरु कसैले विधिपूर्वक छोराछोरीको पालनपोषण गर्न सक्तैनन् । जब आमासँग बिछोड हुन्छ त्यतिबेला उसले आपूmलाई बूढो सम्झन थाल्छ, दुःखी हुन्छ र उसका लागि सारा संसार शून्यजस्तै प्रतीत हुन्छ । त्यसैले आमासमान अर्को कुनै छाया छैन । आमाको छत्रछायामा जुन सुख छ त्यो कहीँ पनि छैन । आमासमान अर्को सहारा छैन, आमासमान अर्को कुनै रक्षक छैन र आमासमान अर्को कुनै प्रिय वस्तु छैन–
नास्ति मातृसमा छाया
नास्ति मातृसमा गतिः ।
नास्ति माृतसमं त्राणं
नास्ति मातृसमा प्रिया ।।
गर्भाशयमा धारण गर्ने भएकाले आमालाई धात्री, जन्म दिने भएकाले जननी, शिशुको अङ्गवद्र्धन वा पालनपोषण गर्ने भएकाले अम्बा, वीर सन्तान जन्माउने भएकाले वीरसू र शिशुको शुश्रूषा गर्ने भएकाले आमालाई शुश्रू भनिएको हो । आमा हाम्रो निकटतम शरीर हो । जसको मस्तिष्क विचारशून्य भएको छैन त्यस्तो कुनै सचेत मान्छेले कहिल्यै पनि आफ्नी आमाको हत्या गर्न सक्तैन ।
यद्यपि मैथुनकालमा आमाबुबा दुवैले सुयोग्य पुत्र प्राप्त गर्ने चाहना राख्छन् तथापि त्यो वास्तविक चाहना आमामा नै प्रतिष्ठित हुन्छ । छोराको गोत्र के हो ? यो आमाले जान्दछिन् । ऊ कसको सन्तान हो ? यो पनि आमाले नै जान्दछिन् । ‘मातुर्भरणमात्रेण प्रीतिः स्नेहः पितुः प्रजाः’ (पूर्ववत् १२।२६६।३५) अर्थात् आमाले बालकलाई गर्भमा धारण गर्ने भएकाले आमाको बच्चामाथि अधिक स्नेह र प्रेम हुन्छ भने पिताको त आफ्ना सन्तानमाथि प्रभुत्वमात्र रहन्छ ।
जब आपैm विवाह गरी साथसाथ धर्माचरण गर्ने प्रतिज्ञा लिएर पुरूष पराई स्त्रीका सामु जान्छ तब यसका लागि स्त्रीहरुलाई दोषी ठान्न सकिँदैन । आफ्नी स्त्रीको भरणपोषण गर्नाले पुरूष भर्ता र पालन गर्नाले पति कहिन्छ । यदि यी दुवै गुण पुरूषमा छैनन् भने उसलाई भर्ता र पति ठान्न सकिँदैन । वास्तवमा स्त्रीको कुनै अपराध हुँदैन, पुरूषले नै अपराध गर्दछ । व्यभिचार वा वेश्यावृत्तिको महान् पाप पुरूषले गर्दछ । त्यसैले पुरूष नै अपराधी हो–
एवं स्त्री नापराध्नोति
नर एवापराध्यति ।
नर एवापराध्यति ।।
मेरी आमाले यस्ता पुरूषसँग आत्मसमर्पण गरेकी थिइन् जो शरीरले र वेषभूषाले पिताजीसमान नै थिइन् । यस्तो अवस्थामा स्त्रीको अपराध हुँदैन, पुरूष नै अपराधी हुन्छ । सबै कार्यमा अबला भएका कारण स्त्रीहरुलाई अपराधका लागि विवश गरिन्छ । तसर्थ पराधीन भएका स्त्रीहरु अपराधी हुँदैनन् । स्त्रीद्वारा मैथुनजनित सुखले तृप्त हुनका लागि कुनै संकेत नगरे पनि उसका कामवासनालाई उद्दीप्त गर्ने पुरूषलाई नै अधर्मको प्राप्ति हुन्छ भन्ने कुरामा शङ्का छैन । यसरी विचार गर्दा एक त उनी नारी भएका कारण नै अवध्य छन् र अर्को उनी मेरी पूजनीय माता हुन् । आमाको गौरव पिताभन्दा बढ्ता छ । नबुझ्ने पशुले पनि स्त्री र आमालाई अवध्य मान्छन् भने मजस्तो समझदार व्यक्तिले आमाको वध कसरी गर्न सक्छु ? कदापि सक्दिनँ ।
विलम्ब गर्ने स्वभावका कारण चिरकारीले यसरी सोचविचार गरिरह्यो । यसरी सोचविचार गर्दा धेरै समय पनि बित्यो । यसै बीचमा उसका पिता पनि वनबाट घर फर्किए । पत्नीको वध गर्ने आदेश अनुचित हो भन्ने कुराले उनी अत्यन्त सन्तप्त भए र आँसु बगाउँदै उनी आफ्ना नित्यकर्महरुमा प्रवृत्त भए । त्यतिबेला इन्द्र ब्राह्मणको रुप धारण गरेर आफ्ना घरमा आएका र उनको उत्तेजित कामवासनाका कारण घटेको घटनामा मेरी श्रीमतीको कुनै दोष छैन । म, मेरी पत्नी र ब्राह्मण रुपधारी इन्द्र कोही दोषी छैनौं तर स्त्रीको वध गर्नुपर्छ भन्ने मेरा मनमा जुन प्रमाद वा असावधानी भयो त्यही नै यस अपराधको जड हो । यदि मेरो छोरा चिरकारीले स्त्रीवधको आज्ञालाई विलम्ब गरेको भए आफ्नो नामलाई सार्थक बनाएर उसले मलाई स्त्रीहत्याको पापबाट बचाउन सक्छ भन्दै पुत्र वास्तवमा चिरकारी बनिदेओस् भनेर उनले बारम्बार चिन्तन गरिरहे ।
पुत्रले आफ्नो आज्ञालाई विलम्ब गरेर कार्यान्वयन नगरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने चिन्तन गर्दै महर्षि गौतम घरमा आउँदा उनले चिरकारीलाई हतियार लिएर बसिरहेको देखे भने चिरकारी झटपट हतियार फ्याँकेर पिताका चरणमा प¥यो । उता पत्नी चुपचाप बसेकी र पुत्र चरणमा परिरहेको देखेर महर्षि गौतम अत्यन्त खुसी भए । त्यसपछि उनले पुत्रलाई ‘चिरं जीव’ भनेर आशीर्वाद दिए । साथै उनले पुत्रलाई चिरकारी बनिरहन सकेका खण्डमा आपूm दुःखी नहुने वचन दिए । त्यसै सन्दर्भमा उनले धेरै समयसम्म सोचविचार गरेर काम गर्ने व्यक्तिमा हुने गुणहरुको चर्चा गरेका छन् ।
चिरेण मित्रं बध्नीया–
च्चिरेण च कृतं त्यजेत् ।
चिरेण हि कृतं मित्रं
चिरं धारणमर्हति ।।
अर्थात् चिरकालसम्म सोचविचार गरेर कसैका साथ मित्रता जोड्नुपर्छ र जसलाई मित्र बनाइयो उसलाई छिटै छाड्नु हुँदैन । यदि छोड्नु नै परेका खण्डमा त्यसको परिणामका बारेमा चिरकालसम्म विचार गर्नुपर्छ । दीर्घकालसम्म सोचविचार गरेर बनाएको जुन मित्र छ, उसैको मित्रता चिरकालसम्म टिक्न सक्छ । राग, घमन्ड, अभिमान, द्रोह, पापकर्म र कसैको अप्रिय गर्नमा जसले विलम्ब गर्छ, उसको प्रशंसा गरिन्छ । बन्धुबान्धवहरु, मित्रहरु, सेवकहरु र स्त्रीहरुका गोप्य अपराधहरुका विषयमा कुनै निर्णय गर्नमा पनि जसले हतार नगरीकन दीर्घकालसम्म सोचविचार गर्छ उसैको प्रशंसा गरिन्छ । यसरी महर्षि गौतमले आफ्नो पुत्रको विलम्बपूर्वक कार्य गरेका कारण प्रशंसा गरेका हुन् ।
चिरमन्वास्य पूजयेत् ।
चिरं धर्मं निषेवेत
कुर्याच्चान्वेषणं चिरम् ।।
अर्थात् चिरकालसमम वृद्धवृद्धाहरुको सेवा गर्नुपर्छ र चिरकालसम्म नै सङ्गत गरेर उनीहरुको आदरसत्कार गर्नुपर्छ । चिरकालसम्म धर्मको सेवन गरी चिरकालसम्म नै त्यसको अनुसन्धान पनि गर्नुपर्छ । धेरै समयसम्म विद्वान्हरुको सङ्गत गरेर चिरकालसम्म शिष्ट पुरूषहरुको सेवामा रहनुपर्छ र चिरकालसम्म नै आफ्नो मनलाई वशमा राख्नुपर्छ । त्यस्तो व्यक्ति चिरकालसम्म तिरस्कार होइन सम्मानको भागी बन्दछ । धर्मको उपदेश दिने व्यक्तिसँग यदि कसैले प्रश्न गर्दछ भने धेरै समयसम्म विचार गरेर नै उसलाई उत्तर दिनुपर्छ । यसो गर्नाले उत्तर दिएर धेरै बेरसम्म पछुताउनुपर्दैन । तसर्थ कतिपय यस्ता कर्महरु हुन्छन्, जसलाई तत्काल नगर्दा हानि हुन्छ भने कतिपय त्यस्ता कर्महरु हुन्छन् जसलाई विलम्ब गर्दा पनि फाइदा नै हुन्छ भन्ने बारेमा हरेक व्यक्तिले सोचविचार गरेर कर्ममा प्रवृत्त हुन सकेमा क्रोही पनि पश्चात्ताप र असफलताको सिकार हुनुपर्दैन ।
लक्की ड्रमा चार जनालाई एक/एक लाख